Ngaba iimagnethi zokonga amafutha yinkohliso? - gcina ngaphezulu
Kutshanje, ulwazi malunga neemagnethi ezinokugcina ngokulula ipetroli zibambe iingqondo zabaqhubi beemoto kwihlabathi liphela. Kule nqaku siza kuzama ukufumana ukuba yinyani okanye yintsomi. Kuza kuba malunga nesixhobo sokubhengezwa sokugcina amafutha, esiqhelekileyo. Imagnethi ye-neodymium yenzelwe ukunciphisa iindleko zepetroli xa useluhambeni.
Abanye abavelisi kwiiwebhusayithi zabo ezisemthethweni babhala la magama alandelayo malunga nomgaqo wenkqubo yokusebenza kwesixhobo: Iimagnethi zesixhobo, ezingadingi mandla ongezelelweyo, ziyawaphula la masalela, avumela ioksijini ukuba idibane, umzekelo, nepetroli, eyenza ukutsha kube lula ngakumbi. Kungenxa yoko le nto ukonga kusenzeka. "
Iziphumo ezikhawulezileyo ezathenjiswa ngumdali: ukwanda kwenkonzo yeesondo, i-catalyst kunye ne-spark plugs; ukonga amafutha 10-20 ekhulwini; ukunciphisa ukukhutshwa kwezinto ezinobungozi ezahlukeneyo phantse ngesiqingatha; ukwanda kwamandla emoto ukuya kwiipesenti ezisixhenxe.
Uninzi lwabashishini ababizwa ngokuba yimagnethi lubhekisa kwimbonakalo yenyukliya entsha. Oku ikakhulu kukukhutshwa okanye ukufunxwa kwamandla kagesi ngayo nayiphi na into.
Ewe intsimi ebonakalayo inefuthe, kodwa ayinanto yakwenza nesi sixhobo. Kukho ulwazi olwaneleyo malunga nale ngxolo yohlobo lwenyukliya, kwaye kwinkcazo yesenzeko, kunye neziphumo ezifunyenweyo kunye neendawo zesicelo, kuyacaca ukuba abathengisi bayazikhohlisa abaqhubi beemoto.
Iqela leemoto laseJamani lisandula ukwenza uvavanyo engahlawulwayo. Lo mbutho woluntu, owona mkhulu kunayo yonke ngoku usebenza eYurophu. Imisebenzi yayo ephambili isemthethweni, ubuchwepheshe kunye noncedo lolwazi. Isiphelo esivela kuvavanyo sasicacile - iimagnethi zokonga amafutha zibubuxoki nenkohliso.
Njengebhonasi, kukho ubungqina obuhlekisayo obuqhotyoshelweyo obubonisa konke ukuthotywa kwezi magnethi:
Nxibelelana noosiyazi abalungisa iimoto kwiifoto;
Ukubuyiselwa umva kwe-100% kwimagnethi yepetroli kwiipiston. Oku kunika isiphumo sebhombu yenyukliya;
Amakhadi eTarot anciphisa kakhulu ukusetyenziswa xa efakwe kwisitulo esingasemva. Ngokukodwa ukuba umkhweli kunye nomqhubi banxibe ii-cap ezenziwe ngefoyile;
Sebenzisa iMangaliso Pribluda endaweni yemagnethi. Olu luphawu oluyingqayizivele lwendawo yophuhliso lwezenzululwazi zomkhosi. Yibeke kwideshibhodi kwaye iimoto ziya kuhamba ngokugudileyo ngenxa yesandi sodidi lwe-quasi-magnetic. Kwaye ngenxa yeendawo ze-nano, iindonga zeesilinda ziya kugutyungelwa yicwecwe elincinci le-titanium, elonyusa ubutyebi amaxesha amaninzi.
Ukongeza, ukuhamba kwemagneti ye-vortex kuya kudala uxinzelelo kwinkqubo yezibaso, eya kuthi ibangele ifuthe le-octane vortex, eya kuthi inyuse inani le-octane nge-15% kunye nokunciphisa ukusetyenziswa kwepetroli nge-20%.
Ukuqukumbela, kuhlala kusitsho ukuba izixhobo ezibonakalayo zoqoqosho lwamafutha ngoncedo lweemagnethi kunye neepilisi zeMPG - zeCAPS nazo ziyinkohliso kwaye ukusetyenziswa kwazo akuniki kuqoqosho lwamafutha. Eli nqaku laqulunqwa labhalwa ngenxa yomsebenzi kwizinto ezininzi ezikwi-Intanethi.
Impompo yerhasi ayimpompi igesi. Unobangela, isisombululo kwingxaki
Khetha i-injini: ebhetele, ipetroli kunye nedizili
Ivumba lepetroli emotweni: izizathu eziphambili zokubonakala kwayo
Edlulileyo Inkukhu ehovini ngeetapile kunye nama-mushroom
Okulandelayo Ukupeyinta imoto-kutheni kwaye njani?